Resaky ny mpitsimpona akotry : misitri-beelona ilay lalàna mifehy ny serasera | NewsMada
Resaky ny mpitsimpona akotry : misitri-beelona ilay lalàna mifehy ny serasera
Lany tao amin’ny antenimiera roa tontan’ny parlemanta ilay volavolan-dalàna niteraka korontana teo anivon’ny sehatra politika fa indrindra indrindra taty ankibon’ny fiarahamonina. Volavolan-dalàna nahamaimay ny fitondrana ny fandanian’ny parlemanta azy io ho lasa lalàna velona. Tsy tafa anefa izany raha mbola tsy mandray didy ny Filohampirenena ho fanambarana azy, (décret de promulgation) sy maka fanapahana ny governemanta amin’ny famoahana ny fomba fampiharana (décret d’application). Mipetraka ny fanontaniana. Resy lahatra noho ny tsy fankatoavan’ny be sy ny maro, na hery eto an-toerana izany na fanehoan-kevitra nambaran’ireo solontenan’ny Firenena mikambana. Sa kosa fihemorana kely hanaovana dingan-davitra amin’ny fotoana tsy ampoizina? Malalaka anefa ny sehatra ahafahana miara-midinika.
Ny fahanginan’ny andaniny tsy manakana ny ankilany hitolona tsy mitsahatra eo amin’ny fanoherana ny fampiharana ilay lalàna voampanga hoe mamohehitra noho izy io mifono tsimokaretina famoretana sy fanidiana ny fahalalahana eo amin’ny tontolon’ny fanapariahana vaovao sy ny fanehoan-kevitra.
Isan’andro dia tsy mitsahatra ny gazety an-tsoratra mamaofy sy mandinika ny antokony sy ampahan’ilay volavolan-dàlana izay manalako ny fahalalahana. Rahona tsy nampoizina hoy ry zareo , noforonina ivelan’izay ny fanekena. Efa nitelina fitaka hono ka tsy ho azo fanindroany. Tsy ho tratran’ny tampoka intsony amin’ny fihodinana manaraka, ka miomana amin’ny fandrariana ny tetika ka efa nandaminana ny fananana solontena iraky ny rehetra.
Mba ahafahana miankina amin’ny teny ifanomezana moa dia tsy vonona intsony ny mpanohitra io volavolan-dalàna io ny hiresaka afa-tsy amin’ny fitondrana an-tampony. Hoy moa ny fitenenana, raha voafitaka indray mandeha ny tena dia afaka hanameloka ilay nahavita izany ho mpamitaka, fa raha voafitaka fanindroany dia tsy afaka hanoatra afa-tsy ny fijerena ny tena ho faran’izay bado. Tsy tapitra ho bado iray trano ireo rehetra na tompon’orinasa na mpiasa matihanina ao amin’io tontolo tandindon-doza io. Efa mamofopofona anefa ny rivotra iainana, manambana hanempotra ka tsara angamba ny fitadiavana vahaolana miaraka. Fantatra fa samy milanja kibay an-damosina. Raha hifampitsapa hery, ny herin’ny hevitra no hany entina ampiadiana, ny fampiasana herin-tsandry sy herim-pahefana tsy hamokatra inona fa hampitatra fery fotsiny.